I-nopal yokukhiqiza amandla | Ukuvuselelwa Okuhlaza
I-nopal yokukhiqiza amandla
Adriana | | Ama-biofuels, I-Biogas, Amandla avuselelekayo
El eliphakathi kwe Isilimo esinothe ngoshukela esinezinga eliphakeme lotshwala, ngakho-ke sinezimfanelo ezibaluleke kakhulu zemvelo okufanele zisetshenziswe ekukhiqizeni ama-biogas noma amandla kagesi.
Isivuno sayo esiphezulu siyaqinisekiswa kucatshangelwa ukuthi ihektha elilodwa le-nopal lingaveza ama-cubic metres angama-1 we biogas noma amalitha ayi-25.000 kadizili, ngaphezulu kakhulu kwezinye izinhlobo ze- i-biomass.
Umthamo wekhalori we-nopal uyefana nokagesi wemvelo kepha uhlanzekile.
Lesi sitshalo asidingi imishini emikhulu noma izinqubo zokulinywa kwaso ngakho-ke kuyindlela ehlukile yokukhiqiza ama-biofuels noma amandla.
Inqubo yokuguqula i-nopal ibe yi-biofuels inenzuzo kwezomnotho, ngakho-ke kulindeleke ukuthi i-boom enkulu isebenzise lesi sitshalo njengomthombo wamandla.
IMexico ingomunye wabakhiqizi abakhulu be-nopal ngoba iwukudla kwendabuko okudliwa kakhulu ngabantu bakhona. Njengoba sibhekene nalesi simo esisha, leli lizwe linethuba lokukhulisa umkhiqizo walo futhi lenze inzuzo enkulu.
I-nopal ingezwa ohlwini olude lwezitshalo amandla angakhiqizwa ngazo noma amafutha. Kubalulekile ukuthi kusetshenziswe izitshalo ezahlukahlukene ukuvikela ukulinywa okulinywa okulodwa ukuze kusetshenziswe amandla ngoba kulimaza imvelo futhi kwehlisa nezimo zemvelo ukuze umhlaba ungaqhubeki nokusetshenziswa.
Ukusetshenziswa kwamasu nezinqubo zezolimo ezisimeme kubalulekile ukuze sikwazi ukukhiqiza uphethiloli osuselwa ezitshalweni esikhathini esizayo.
I-Prickly pear yinto enhle kakhulu eluhlaza yezitshalo ze-biogas ngoba ishibhile futhi inesivuno esihle kakhulu, kepha imikhiqizo ebalulekile iyadingeka ukuyinikeza.
Ukuhlola umthamo nezimo zokukhiqiza ezidingekayo esitshalweni ngasinye kubalulekile lapho ukhetha ukuthi yiluphi uhlobo lwesitshalo ozolusebenzisa ukukhiqiza amandla.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Ama-biofuels » I-Biogas » I-nopal yokukhiqiza amandla
Njengomcwaningi ozinikele ekutadisheni i-nopal njengesitshalo samandla, ngiyabonga ngobuqotho ubukhona balesi sihloko, kepha ngicabanga ukuthi kungakuhle ukuthi unakekele kakhudlwana ekubhalweni kwayo (ukuze kungalethi ukungaqondi) futhi ngibuyekeze izibalo zokukhiqizwa kwe-biogas ezingaba khona, zenziwe ihaba Ngokubona kwami, noma kunjalo.
Isakhiwo sokuhlala esine-photovoltaic solar energy ukufakwa
IBrazil kanye nama-biofuels